Mpanotra mahay… – Malag@sy Miray
Rehefa miresaka momba ny hotra na massazy ny tanora taloha sy ny vitsivitsy ankehitriny dia zavatra hafa mihitsy no azo an-tsaina rehefa firenena vitsivitsy ao Azia ao no resahina. Hafa mihitsy mantsy ny fomba fanorana any aminsquowhawydizany firenena izany raha oharina aminsquowhawydizay mety fantatra sy fahita fa misy eto Madagasikara.
Tao anatinsquowhawydny volana vitsivitsy anefa izao dia variana ny tena fa somary niova na nivoatra ny fomba fanotra misy eto Madagasikara, indrindra fa ny eto Antananarivo. Miha-mitombo tsikelikely ireo fampahafantarana sy dokam-barotra madinika aminsquowhawydny gazety mpiseho isansquowhawydandro.
Indro misy lahatsoratra iray hita tao aminsquowhawydny gazety mpivoaka isansquowhawydandro iray : « J.F jolie, massage à domicile, à lsquowhawydHôtel, tout type de massage : bodybody, sensuel, turc, californien, thaï« »
Maromaro izy ireo no ohatra izany ao anaty gazety ao. Misy ny hita eny aminsquowhawydny pejy voalohany toa ireo orinasa tantanansquowhawydny tatsinanana na ihany koa ireo orinasa malagasy matanjatanjaka. Ary ny somary osaosa na miafinafina kosa dia any aminsquowhawydny takila « antso » any anatiny no misy azy ireo.
Toerana maro no efa manomboka fantatra fa misy azy ireo eto Antaninarivo raha tsy hilaza afa-tsy ny ao Soarano, na Faravohitra, na Ambondrona, na Ampandrana, na Ampasanimalo, na ihany koa Ambohibao. Ireo aloha no tena hita sy re fa tsy ambakansquowhawydizany ny any aminsquowhawydny takona rehetra any.
Inona no mety nampirongatra izy ity ? Araka ny eritreritra dia zavatra roa lehibe no tena hita sy tsapa fa nampirongatra ito asa vaovao tsy dia vao mahasadaikatra ny mpifady ity. Voalohany aloha ny korontana misy eo aminsquowhawydny firenena ka mampihena ireo mpanjifa ny mpiasansquowhawydny alina. Hany ka tsy maintsy miova ny lahasansquowhawydireo vehivavy ka misy mahatsiaro fa miha-mihaja kokoa izany aminsquowhawydizay fotoana izay.
Ny Antony lehibe faharoa dia ny fifaneraserana aminsquowhawydny sinoa sy ireo firenena aziatika. Misy ny malagasy mandeha any Bangkok, Gungzhou, Jakarta, Macao na Hong Kong ary misy ireo asiatika tonga mifindra monina sy mampiasa vola eto Madagasikara. Ny fifaneraserana no manitatra ny saina sy mampitsiry zava-baovao ny olona. Ka misy ireo malagasy efa nanandrana tany no mitady mitovitovy aminsquowhawydizany rehefa mody, ary misy kosa ireo vahiny no mizara kolotsaina hafa.
Raha tsiahivina dia toa nisy korontana teo aminsquowhawydireo nampalaza ny hotra aminsquowhawydny alalansquowhawydny safosafo ka nahatonga ny tomponsquowhawydorinasa nametraka izany tany aminsquowhawydny OMAPI. Nisy ihany koa ireo vehivavy niasa tao aminsquowhawydireo orinasa sinoa na malagasy sasany no naneho ny tsy fahafaliany rehefa voaroaka ka namoaka taminsquowhawydny gazety ny fisiansquowhawydireo toerana ireo.
Rehefa nanontaniansquowhawydny mpanao gazety na ny olona mpifandray aminsquowhawydny aterineto moa ireto mpampiasa taloha dia nanambara fa nanao firaisana taminsquowhawydny « client » ireto vehivavy mpanotra ka noroahina satria tsy azo ekena ny zavatra toy izany.
Nisy andian-dahatsoratra nivoaka taminsquowhawydny gazety isansquowhawydandro iray ihany koa nilaza fa rehefa tonga aminsquowhawydireny toerana voalaza etsy ambony ireny ianao dia aseho sary maromaro na karazana «catalogue » ahafana misafidy ny mpanotra izay vao miditra aminsquowhawydny efitra samihafa. Asa marina moa izay tena mitranga ao ambadiky ny tsy hita maso ao.
Tsy misy ny asa adala, hoy ny fitenenana, saingy ny asa mamoha fady kosa no tandrenama mba tsy atao na dia mahantra sy mandia fotoan-tsarotra aza i Gasikara.
Saingy misy ihany kosa ireo efa tena maty hanina aminsquowhawydny fanorana mahasalama toy ny ataonsquowhawydny Homeopharma izay mbola tsy nisy nahenoina feo ratsy aloha hatreto. Na ihany koa ireo mpanotra Ayurvedique, Shiatsu sy ny karazany hafa izay lazaina fa manadio no mahasalama.
Enga anie fotsiny tsy ilay karazana hotra toy izay mahazo ny mpamily fiara iombonana na ireo karazana kolikoly iadinsquowhawydny Bianco no hahasalama anao.
8 janvier 2013 à 8:06
MISY ILANA IO FOMBA MIAJA IO IHANY INDRAINDRAY, INDRINDRA INDRINDRA HO AN’NY LEHYLAHY TIA FIRAISANA NEFA TSY MANANA FAHASAHIANA, NA KOA TSY MANANA FOTOANA HIFANERASERANA AMIN’IREO MPAMITAPITAKA ATO ANATIN’NY ENTERNET INDRINDRINDRINDRA